(ဟန် ဧကရာဇ် ဂေါင်ဇူ မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
ဟန်နန်းတွင်း ဒဏ္ဍာရီတွင် လျိုပန်းသည် အဝါရောင် ဧကရာဇ် မှ ဆင်းသက်သော ဒဏ္ဍာရီလာ ဧကရာဇ်ရောင် ၏ မျိုးဆက်တစ်ဦးဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် ၎င်းသည် ရှေးတရုတ်မိသားစုများအကြားတွင် မိုးမြေမှ ပေးအပ်သော အုပ်စိုးမှုအာဏာကို ကြေငြာရာတွင် သုံးကြသည့် အလေ့တစ်ရပ်ဖြစ်သည်။
မှတ်တမ်းများအရ ကလေးငယ်လျိုပန်းသည် စကားတည်သည်။ဩဇာကြီးသည်။ အလွန်ရက်ရောသည်။သည်းခံရိုကျိုးမှု ရှိသည်။ သို့သော်လည်း ငယ်ငယ်က ပေါ့ပေါ့နေ ပေါ့ပေါ့စားပုံစံနှင့်နေခဲ့သည်။ စာဖတ်ခြင်းကိုလည်း မနှစ်သက်၊ လယ်ယာနှင့် အလုပ်ကြမ်း ကိုလည်း စိတ်မဝင်စားပေ။ အမြဲတမ်း ပြဿနာရှာလေ့ရှိသည်။ထို့ကြောင့် သူ၏ ဖခင်ကြီးသည် အပျင်းထူလေ့ရှိသည့် လျိုပန်းကို "လူရှုပ်လေး"ဟု မကြာခဏ ခေါ်ခဲ့သည်။ လျိုပန်းသည် ထိုပုံစံတွင် ဆက်နေခဲ့ပြီး သူ့ညီ၏ မိသားစု အပေါ်တွင် စားဝတ်နေရေးအတွက် မှီခိုခဲ့သည်။ အသက်အရွယ်ကြီးမြင့်လာသောအခါ သူသည် သခင်ကြီး ကျင်းလင် ၏ အပါးတော်မြဲဟောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်သည့် ကျန်းအာ(တရုတ်: 张耳, ? — ၂၀၂ဘီစီ) နှင့် မိတ်ဆွေဖြစ်ခဲ့ရုံသာမက အတူတကွ နေထိုင်ခဲ့သည်။ကျန်းအာသည် ထိုအချိန်က အနီးအနားရှိ ဝေဟွမ်နယ်တွင် ရာဇဝတ်တရားသူကြီး ဖြစ်သည်။
ချင်နိင်ငံသည် ချူနိုင်ငံကို အနိုင်ယူလိုက်သောအခါ ကျန်းအာသည် ပုန်းရှောင်ခဲ့သည်။လျိုပန်းသည်လည်း နေအိမ်သို့ ပြန်ခဲ့သည်။ မကြာမီတွင် သူသည် အနီးအနားရှိ ပေ့ခရိုင် ရှိ စီရွှီအဆောက်အဦး(泗水亭)တွင် ဒေသခံ ဥပဒေအရာရှိတစ်ဦးအဖြစ် အမည်တင်သွင်းခံရပြီး များမကြာမီ ရာထူးကိုလက်ခံရယူခဲ့သည်။ ထိုနေရာတွင် သူသည် သူ၏ မိတ်ဆွေများဖြစ်သူ၊ ရှောင်ဟီ နှင့် ကောဝ်ရှန်း တို့၏ လက်အောက်တွင် အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။ သူ၏ မိတ်ဆွေများသည် သူ့၏ လူမိုက်ဆန်ဆန်အပြုအမူများအတွက် မကြာခဏ ဖုံးကွယ်ပေးခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း လျိုပန်းသည် နယ်မှ အုပ်ချူပ်ရေးအရာရှိများနှင့် နီးကပ်သောဆက်ဆံရေးတစ်ခုကို ရယူခဲ့ပြီး ထိုဒေသတွင် နာမည် တစ်လုံးတွင်ခဲ့သည်။ လျိုပန်းသည် တစ်ချိန်က ရှန်ယန် မြို့တော်တွင် လုပ်အားပေးရန် စေလွှတ်ခြင်းခံရသည်။ ထိုအခါ သူသည် ချင်ရှီဟွမ်တီ ၏ နိုင်ငံအဝန်း တိုင်းခန်းလှည့်လည်တော်မူခြင်းကို မျက်ဝါးထင်ထင်တွေ့မြင်ခဲ့သည်။ နန်းတွင်း၏ ဂုဏ်အရှိန်အဝါကို အားကျသော ကြောင့် သူသည် ဤသို့ ကြွေးကြော်ခဲ့သည်။ "ကောင်းပေစွ၊ ယောက်ျားကောင်းတစ်ယောက်သည် ဤသို့ ဖြစ်အပ်သည်(嗟乎，大丈夫当如此也)"
တစ်နေ့တွင်မူ ရှန်ဖု ခရိုင် မှ ပေ့ခရိုင်သို့ မကြာသေးမီကမှ ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့သော လွီဝမ်း (吕文၊လွီကုန်း吕公ဟုလည်း ခေါ်သည်) ဟုခေါ်သည့် ချမ်းသာကြွယ်ဝ၍ မျိုးရိုးမြင့်အိမ်တော်မှ ဆင်းသက်လာသည့် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသည် ဒေသခံအရာရှိများကို ဧည့်ခံပွဲကျင်းပပေးခဲ့သည်။ လွီဝမ်းအတွက် လက်ဆောင်လက်ခံသည့်တာဝန်ကို ယူထားသည့် ရှောင်ဟီသည် "ဒင်္ဂါး ၁၀၀၀ တန်ဖိုးရှိသည့် လက်ဆောင် မဆက်သသူများသည် ခန်းမအပြင်ဖက်တွင် နေရာယူကြရမည်" ဟု ကြေညာလိုက်သည်။ လျိုပန်းသည် ထိုနေရာကို မည်သည့် လက်ဆောင်မှ မယူပဲ သွားရောက်ခဲ့ပြီး "ငါ ဒင်္ဂါး ၁၀၀၀၀ ပေးတယ်"ဟု ဆိုခဲ့သည်။ လွီဝမ်းသည် လျိုပန်းကို လွန်စွာလေးစားသွားခဲ့ပြီး ချက်ချင်းပင် မတ်တပ်ရပ်ကာ ကြိုဆိုခဲ့သည်။ ထို့နောက် ခန်းမထဲသို့ ကြိုဆိုကာ မိမိဘေးတွင် ထိုင်စေခဲ့သည်။ ရှောင်ဟီက "လျိုပန်း သည် လေးလေးနက်နက် ပြောခြင်းမဟုတ်ပါ"ဟု ဆိုသော်လည်း လက်မခံခဲ့ပေ။ လွီဝမ်းသည် လျိုပန်းကို အောက်ပါစကားကို ဆိုခဲ့သည်။ "ငါသည် များစွာသော လူတို့ကို နိမိတ်ဖတ်ခဲ့ပေးဖူးသော်လည်း သင့်ကဲ့သို့ ထူးခြားသူကို မမြင်စဖူးပါ"။ လွီဝမ်းသည် သူ၏ သမီး လွီကျီး ကို လျိုပန်းနှင့် လက်ထပ်ထိမ်းမြားစေခဲ့သည်။ လွီကျီးသည် လျိုပန်းအတွက် လျိုယင်း (နောင်တွင် ဧကရာဇ် ဟွီ)နှင့် သမီးတစ်ဦး (နောင်တွင် လု မင်းသမီး ယွမ်) ကို မွေးဖွားပေးခဲ့သည်။
လျိုပန်း နှင့် သူ၏ နောက်လိုက်တို့သည် မန်ဒန်းတောင် (芒碭山 ၊ယခုခေတ် ယုံချန်း ၊ရှန်ချူ၊ဟီနန်) တွင် အခြေချကာ ခံတပ်တစ်ခုကို တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ လျိုပန်းသည် သူ၏ မိတ်ဆွေဟောင်းများဖြစ်သော ရှောင်ဟီ နှင့် ကောဝ်ရှန်း ကဲ့သို့သော ပေ့ခရိုင်မှ မိတ်ဆွေများနှင့် လျို့ဝှက်အဆက်အသွယ်ရှိသေးသည်။ ၂၀၉ ဘီစီတွင် ချန်ရှန် နှင့်ဝူဂွမ် တို့သည် တဇီချန်း ဆူပူအုံကြွမှု ကို စတင်ကာ ချင်မင်းဆက်ကို တွန်းလှန်ရန် ကြိုးစားခဲ့သည်။ ပေ့ခရိုင်၏ နယ်ပိုင် သည် ပုန်ကန်မှုတွင် ဝင်ရောက်ပါဝင်ရန် စဉ်းစားခဲ့ပြီး ရှောင်ဟီ နှင့် ကောဝ်ရှန်းတို့၏ အကြံကြောင့် သူသည် ဖန်းခွိုင် (လျိုပန်း၏ အမျိုး) ကို လျိုနှင့် သူ၏ နောက်လိုက်များကို သူ့အား အားပေးထောက်ခံရန်အတွက် ရည်ရွယ်၍ တိုက်တွန်းစေခြင်းငှာ စေလွှတ်ခဲ့သည်။
အရှေ့ပိုင်း ဟန် ခေတ်(၂၅-၂၂၀ အေဒီ) တရုတ်ပြည်၊ဟီနန်နယ်၊ ကျန်းကျိုး (ကျီး ခရိုင် အနောက်ဖက် သာ)ရှိ ဆွီဟီမြစ် တောင်ဖက်ကမ်းပါးပေါ်ရှိ တဟူတင်း အုတ်ဂူ တရုတ်စကား: 打虎亭漢墓, Pinyin: Dahuting Han mu)တွင် ညစာစားပွဲမှ ရွှင်မြူးဖွယ် မြင်ကွင်းတို့(ရန်ရင်း 宴飲), အက နှင့် ဂီတ (ဝူယွဲ့ 舞樂), လေ့ကျင့်ခန်း (ပိုင်ကျီ 百戏),နှင့် နပန်းသတ်ခြင်း (ကျန်းပု 相扑)ကို ပြသထားသည့် တရုတ် အုတ်ဂူ နံရံဆေးရေးပန်းချီ
ညာဖက်: ကြေးရေ သုတ်ထားပြီး တိရစ္ဆာန်ပုံ ပန်းပုလက်ရာများဖြင့် တန်ဆာဆင်ထားသည့် ဝိုင်နွှေးခွက် , ၂၆ ဘီစီ, အနောက်ပိုင်း ဟန် ခေတ်
ရှန်းယုသည် လျိုပန်း၏ ဂွမ်ကျုံးသို့ အပြင်းနှင်ရာတွင် မိမိကို အသာစီးရယူနိုင်ခဲ့သည်ကို မကျေနပ်ခဲ့ပေ။သူ၏ အကြံပေး ဖန်ကျန် နှင့် လျိုပန်း၏ တပ်ထဲတွင် ခိုဝင်နေသည့် သူလျှိုတစ်ဦးဖြစ်သည့် ကောဝ်ဝူရှန်း (曹無傷) တို့၏ သွေးထိုးမှုကြောင့် သူသည် လျိုပန်းကို ထောင်ချောက်ဆင်၍ သတ်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ စားသောက်ပွဲတွင် လုပ်ကြံရန် လျို့ဝှက်စွာဖြင့် ကြံစည်နေရင်း သူသည် လျိုပန်းကို စားသောက်ဧည့်ခံပွဲသို့ ဖိတ်ခေါ်ဟန်ဆောင်ခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း ရှန်းယု၏ ဦးလေး ရှန်းဘို သည် လျိုပန်း၏ နည်းဗျူဟာရှင် ကျန်းလျန် ၏ မိတ်ဆွေအရင်း ဖြစ်နေခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ရှန်းဘိုသည် သူ၏ တူကို စားပွဲတွင် လျိုပန်းကို သတ်ဖြတ်ခြင်းကို ကိုယ်တိုင်အမိန့်မပေးရန် ဆွဲဆောင်တိုက်တွန်းနိုင်ခဲ့သည်။ ရှန်းယု၏ အဆုံးအဖြတ်မခိုင်မာမှုကို မကျေနပ်သည့် ဖန်ကျန်သည် ရှန်းယု၏ တစ်ဝမ်းကွဲ ရှန်းကျွမ်း ကို ဓားရေးအက ကနေဟန် ဆောင်ပြီး အခွင့်အရေးရစဉ် လျိုပန်းကို သတ်ရန် အမိန့်ပေးခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း ရှန်းဘိုသည် ဓားရေးအကတွင် ဝင်ရောက်ပါဝင်ခဲ့ပြီး လျိုပန်းထံသို့ သူ့တူ၏ ဓားရွယ်မိတိုင်း ထိုဓားကို ဝင်ကာခဲ့သည်။
သေဘေးကို မြင်သော ကျန်းလျန်သည် အပြင်ကို တိတ်တဆိတ် ထွက်ခဲ့ပြီး လျိုပန်း၏ ယောက်ဖလည်း ဖြစ်၍ ကိုယ်ရံတော် လည်းဖြစ်သည့် ဖန်းခွိုင် ကို ခေါ်ခဲ့သည်။ ဖန်းခွိုင်သည် စားပွဲတော်ကို ထုခွဲကာ ရှန်းယု၏ ယုတ်မာသည့် အကြံအစည်ကို ရှန်းယုရှေ့တွင်ပင် ဖွင့်ဟ ဆဲဆိုခဲ့သည်။ ဖန်းခွိုင်၏ စွပ်စွဲမှုကို ခံရ၍ အရှက်ရသော ရှန်းယုသည် ဓားရေးအကကို ရုပ်သိမ်းစေ၍ ဖန်းခွိုင်ကို ရဲရင့်သစ္စာရှိသောကြောင့် ဟူ၍ ဆုချခဲ့သည်။ လျိုပန်းသည် ထို့နောက် အပေါ့အပါးသွားချင်ဟန် ပြုကာ ထိုအခွင့်အရေးကို သုံး၍ ရှန်းယု၏ တပ်မှ မကြေညာပဲ ထွက်ပြေးခဲ့သည်။ သူ နှင့် သူ၏ တပ်သည် ရှန်းယန်မှ ချက်ချင်းထွက်၍ အနောက်ဖက်သို့ ဆုတ်ခွာစေခဲ့သည်။ ရှန်းယုသည် ရှန်းယန်သို့ ဝင်ကာ လုယက်ခြင်း၊မြို့ကို ဖျက်ဆီးကာ အီပန်းနန်းတော်ကို မီးတိုက်ခဲ့သည်။
ဧကရာဇ် ကောင်းကျူသည် သူ၏ စစ်တပ်များကို ဖျက်သိမ်းပြီး စစ်သည်တို့ကို နေအိမ်သို့ ပြန်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ ဂွမ်ကျုံးတွင် နေထိုင်သူများသည် အခွန်အခ နှင့် အခမဲ့လုပ်အားပေးရခြင်း တို့မှ ၁၂ နှစ်တာ ကင်းလွတ်မည်ဖြစ်ပြီး မိမိတို့၏ နေအိမ်သို့ ပြန်သူများသည် ၆ နှစ်တာ ကင်းလွတ်မည် ဖြစ်ကြောင်း နှင့် သူတို့အဖို့ အစိုးရမှ တစ်နှစ်တာ ထောက်ပံ့ပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာသည်။သူသည် စစ်ပွဲကာလတွင်းက ဆာလောင်မွတ်သိပ်မှုကြောင့် မိမိတို့ကိုယ်ကို ကျွန်အဖြစ်ရောင်းစားခဲ့ရသည့် သူများကိုလည်း လွတ်မြောက်စေခဲ့သည်။ ၁၉၅ ဘီစီအီးတွင် ဧကရာဇ်သည် အမိန့်တော် နှစ်ခု ထုတ်ပြန်သည်။ ပထမဆုံး တစ်ခုသည် အခွန်အခ နှင့် အခမဲ့လုပ်အား ပေးဆောင်ရခြင်းကို လျှော့ချသည့် အမိန့်စာဖြစ်သည်။ ဒုတိယတစ်ခုသည် နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း၏ ၁၀လပိုင်းတွင် လက်အောက်ခံ မင်းများမှ နန်းတွင်းသို့ ဆက်သရမည့် လက်ဆောင်ပဏ္ဏာ ပမာဏကို သတ်မှတ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ စိုက်ပျိုးရေးအတွက် ကောက်ခံသည့် မြေခွန်ကိုလည်း ရိတ်သိမ်းရရှိသည့် ဆန်စပါးတို့၏ ၁/၁၅ နှုန်းဖြင့် လျှော့ချ ကောက်ခံစေသည်။ သူသည် ဒင်္ဂါးသွန်းလုပ်မှုကိုလည်း ပုဂ္ဂလိကပိုင် အဖြစ်သိမ်းလိုက်သည်။
ငယ်ရွယ်စဉ်က ဧကရာဇ် ကောင်းကျူသည် စာဖတ်ခြင်းကို မနှစ်သက်ခဲ့ပဲ ကွန်ဖြူးရှပ်ဝါဒကို အထင်အမြင်သေးခဲ့သည်။ ဧကရာဇ် ဖြစ်လာသည့် အခါတွင်လည်း ထိုအတိုင်းပင် ရှိခဲ့ရာ စာပေပညာရှင် လုကျား(သို့မဟုတ် လုကု)နှင့် တွေ့သည့်အချိန်ကျမှ ပြောင်းလဲသွားသည်။ လုကုသည် ၁၂ တွဲရှိသည့် ကျင်းရု(新語) အမည်ရှိ စာအုပ်ကို ရေးသားခဲ့သည်။ ထိုစာအုပ်တွင် တိုင်းပြည်ကို ကြမ်းတမ်း၍ ပြင်းထန်သော ဥပဒေများဖြင့် အုပ်ချုပ်ခြင်း(ချင်မင်းဆက်တွင် ထိုအတိုင်း အုပ်ချုပ်သည်)ထက် အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ခြင်း၊ ဖြောင့်မှန်စွာ အုပ်ချုပ်ခြင်းဖြင့် ရနိုင်သော အကျိုးတို့ကို ရေးသားဖွဲ့ဆိုထားသည်။လုကုသည် ထိုစာအုပ်၏ အတွဲ တစ်တွဲကို ရေးသားပြီးတိုင်း ဧကရာဇ် ရှေ့တော်မှောက်တွင် ဖတ်ပြခဲ့သည်။ ဧကရာဇ်သည် များစွာ နှစ်သက်ခဲ့လေသည်။ထိုသို့ဖြင့် ဧကရာဇ် ကောင်းကျူ နန်းစံစဉ်ကာလတွင် ကွန်ဖြူးရှပ်ဝါဒသည် တိုးတက်ပျံ့ပွား၍ (ချင်ခေတ်ကာလက) ဥပဒေ ဝါဒ၏ နေရာတွင် တိုင်းပြည်၏ အတွေးအခေါ် မူဝါဒ အနေဖြင့် အစားထိုးလာခဲ့သည်။လုကု အပါအဝင် ကွန်ဖြူးရှပ် စာပေပညာရှင်များကို အစိုးရအဖွဲ့တွင် အမှုထမ်းစေခဲ့သည်။ ဧကရာဇ်သည် ချင်ခေတ်မှ အချို့သော ဥပဒေများကို ပြန်လည် ပြုပြင်ပြီး အချို့သော ပြစ်ဒဏ်များကိုမူ လျှော့ချစေခဲ့သည်။၁၉၆ ဘီစီအီးတွင် ယင်းပု ၏ ပုန်ကန်ခြင်းကို နှိမ်နင်းပြီးနောက် သူသည် ကွန်ဖြူးရှပ်၏ မွေးဖွားရာနေရာဖြစ်သည့် ရှန်တုန်းကို ဖြတ်သွားစဉ် အတွေးအခေါ်ပညာရှင်ကြီးကို အရိုအသေပြုရန် အတွက် အခမ်းအနားတစ်ခုကို ကိုယ်တော်တိုင် ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
၁၉၅ ဘီစီအီးတွင် ဧကရာဇ် ကောင်းကျူ၏ ကျန်းမာရေးသည် ဆိုးဝါးလာသည်အ့လျောက် သူသည် လျိုယင်း နေရာတွင် လျိုယုရီ နှင့် အစားထိုးရန် ပိုမို စိတ်စောလာခဲ့သည်။ ကျန်းလျန်သည် ဧကရာဇ်ကို ကန့်ကွက်ပြောဆိုခဲ့သော်လည်း လျစ်လျူရှုခံရသောအခါ သူ၏ ကျန်းမာရေးကို အကြောင်းပြ၍ မင်းမှုထမ်းဘဝမှ အနားယူခဲ့သည်။ အိမ်ရှေ့စံ၏ ဆရာဖြစ်သည့် ရှုစွန်း တုန် နှင့် ကျိုးချန်းသည်လည်း ဧကရာဇ် ၏ အထက်ပါ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ကန့်ကွက်ခဲ့သည်။ ကျိုးချန်း မှ ဤသို့ ပြောဆိုခဲ့သည်။ "ကျွန်တော်မျိုးသည် အငြင်းအခုံပြုရာတွင် သိပ်မတော်ပါ။သို့ရာတွင် ယခုလို ဆုံးဖြတ်ချက်သည် မကောင်းမှန်း သိပါသည်။ အကယ်၍ အရှင်သည် အိမ်ရှေ့စံကို နန်းချသော် ကျွန်တော်မျိုးသည် အရှင့်၏ အမိန့်တော်ကို လိုက်နာတော့မည် မဟုတ်ပါ" ကျိုးချန်းသည် စကားလွန်သွားသော်လည်း သူ့တွင် စကားထစ်သည့် ပြဿနာရှိသည့်အတွက် သူ၏ ပြောပုံသည် ဧကရာဇ် အဖို့ ရယ်စရာပင် ဖြစ်နေပေတော့သည်။ ဧကရာဇ်သည် ရယ်မော၍ သိပ်မကြာမီ ရှန် တောင် တော်၏ သူရဲ လေးဖော်သည် နန်းတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ခစားခဲ့သည်။ ဧကရာဇ်သည် သူတို့ကို တွေ့သောအခါ အလွန် အံ့ဩခဲ့သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ထိုသူတို့ကို ဧကရာဇ်သည် ယခင်က သိမ်းသွင်းခဲ့ဖူးသော်လည်း ထိုသူတို့က မည်သည့်အခါကမျှ လက်ခံခဲ့ခြင်း မရှိသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ထို သူရဲ လေးဖော်သည် လျိုယင်းသည်သာ အိမ်ရှေ့စံအဖြစ် ရှိနေသေးလျှင် သူ့ကို အနာဂတ်တွင် ကူညီ ဖေးမပါမည်ဟု ကတိပြုခဲ့သည်။ ဧကရာဇ်သည် လျိုယင်းတွင် ဤသူတို့၏ အားပေးထောက်မမှုကို ရရှိထားသောကြောင့် အလွန် နှစ်ခြိုက်ကာ အိမ်ရှေ့စံ ပြောင်းလဲမည့် အတွေးကို ပယ်ဖျက်ခဲ့သည်။ 
သရုပ်ဖော်ထားသည့် မြေထည် ရုပ်ထုများ၊ အနောက်ပိုင်း ဟန် ခေတ်မှ၊ မြင်းစစ်သည်တော်များ၊ ဟိုင်နန် နယ် ပြတိုက်
ဧကရာဇ် ကောင်းကျူသည် ယင်းပုကို နှိမ်နင်းသည့် စစ်ဆင်ရေးတွင် အမှတ်တမဲ့ ပစ်ခတ်လိုက်သည့် မြားတစ်စင်း၏ ထိခိုက်မှုကို ခံလိုက်ရသည်။ သူသည် ထိုအချိန်မှစ၍ အလွန်တရာ နာမကျန်းဖြစ်လာပြီး သူ၏ အတွင်းဆောင်ထဲတွင် အချိန်ကြာမြင့်စွာ နေထိုင်ခဲ့ပြီး သူ၏ ကိုယ်ရံတော်များကို သူနှင့်တွေ့ဆုံသူတိုင်းနှင့် တွေ့ခွင့်ပြုရန် ငြင်းဆန်စေခဲ့သည်။ရက်များစွာကြာသောအခါ ဖန်းခွိုင်သည် နန်းဆောင်သို့အတင်းဝင်ခဲ့သဖြင့် အခြားသောနောက်လိုက်နောက်ပါတို့သည်လည်း သူ့နောက်မှ လိုက်ဝင်ခဲ့ကြလေသည်။ သူတို့သည် ဧကရာဇ်၏ အိပ်ယာထက်တွင် လဲလျောင်းနေပြီး မိန်းမစိုးတစ်ဦး၏ ပြုစုခြင်းကိုသာ ခံနေခဲ့သည်ကို တွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ ဖန်းခွိုင်သည် အောက်ပါအတိုင်းပြောခဲ့သည်။ "ဧကရာဇ် အရှင်သည် နိုင်ငံတော်ကို သိမ်းပိုက်သောအခါ မည်မျှ ဂုဏ်ယူဖွယ်ရှိပါသနည်း။ ကျွန်တော်မျိုးတို့ မည်မျှ နွမ်းလျခဲ့ပါသနည်း။ အရှင့်၏ ကျွန်တို့သည် အရှင်မင်းကြီး နာမကျန်းဖြစ်နေသည်ကို ကြားသိရသောအခါ မည်မျှ ပူပင်ခဲ့ရပါသနည်း။သို့သော်လည်း အရှင်မင်းကြီးသည် ကျွန်တော်မျိုးတို့ကို တွေ့ရန် ငြင်းဆန်ရုံသာမက မိန်းမစိုးတစ်ယောက်၏ အဖော်ပြုမှုကို ပိုနစ်သက်ခဲ့ပါသည်။ အရှင်မင်းကြီးသည် ကျောက်ကော်၏ အဖြစ်ကို မေ့လျော့နေပါသလော" ဟု ပြောလေရာ ဧကရာဇ် မင်းကြီးသည် ရယ်မော၍ အိပ်ယာမှ ထကာ မိမိ၏ အမှုထမ်းတို့ကို တွေ့ဆုံလေသည်။
ဧကရာဇ် ကောင်းကျူ၏ ကျန်းမာရေးသည် တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ ယိုယွင်းလာရာ မိဖုရားခေါင်ကြီး လွီကျီးသည် နာမည်ကျော် သမားတော်တစ်ဦးကို ပင့်ဖိတ်ကာ ကုသစေသည်။ ဧကရာဇ်သည် သူ၏ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို သိလို၍ မေးမြန်းရာ သမားတော်က သူ၏ ရောဂါကို ပျောက်ကင်းအောင် ကုသနိုင်ကြောင်း ပြန်ဖြေကြားသည်။ သို့ရာတွင် ဧကရာဇ်သည် ထိုအဖြေကို မနှစ်မြို့ပဲ သမားတော်ကို အောက်ပါအတိုင်း ကြိမ်းမောင်းသည်။ "ငါသည် ဤ နိုင်ငံတော်ကို အဝတ်တစ်ထည် ကိုယ်တစ်ခု ဖြင့် ဓားတစ်စင်းကို ဆောင်ကာ သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့သည်မှာ မိုးမြေ၏ အလိုပင် မဟုတ်ပါလော့။ ငါ၏ အသက်သည် မိုးမြေ၏ အလိုသာတည်း။ ပျန်းချွီပင် ရှိစေကာမူ အချည်းနှီးသာတည်း" ဟု ဆိုလေသည်။ သူသည် ဆေးကုသမှု ခံရန် ငြင်းဆိုခဲ့ပြီး သမားတော်ကို ပြန်လွှတ်ခဲ့သည်။သူ မကွယ်လွန်မီ [ချောင်ရှန်း]] သည် [[အမတ်ချုပ်ကြီး [တရုတ်ပြည်]| အမတ်ချုပ်] အဖြစ် ရှောင်ဟီ ကွယ်လွန်ပြီးနောက် သူ၏ နေရာတွင် ဆက်ခံနိုင်ပြီး ဝမ်လင်းသည် ချောင်ရှန်း၏ နေရာတွင် ဆက်ခံနိုင်သည် ဟု ဆိုခဲ့သည်။ ဝမ်လင်းသည် သူ၏ တာဝန်တို့ကို ကျေပွန်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ငယ်ရွယ်သေးသည် ဟု ဆိုနိုင်သည့်အတွက် ချန်ပင်းသည် ဝမ်လင်းကို ကူညီထောက်မပေးရမည်ဟု မိန့်မှာခဲ့သည်။သို့သော် ချန်ပင်းသည် သူကိုယ်တိုင်လည်း အမတ်ချုပ်ကြီး တစ်ဦး၏ ရာထူးတာဝန်များကို ထမ်းရွက်နိုင်သည်ဟု ယူဆခဲ့သည်။ သူသည် ကျိုးပိုကိုလည်း စစ်သေနာပတိရာထူးအတွက် သင့်တော်သူဟု မှတ်ချက်ချခဲ့သည်။ သူသည် ချန်းလီနန်းတော် (長樂宮) တွင် ဇွန်လ ၁ ရက် ၁၉၅ ဘီစီအီးတွင် ကွယ်လွန်ခဲ့ပြီး နောင်တွင် ဧကရာဇ် ဟွီ ဟု အမည်တွင်မည့် လျိုယင်းမှ သူ၏ နေရာတွင် ဟန် နိုင်ငံတော်၏ ဧကရာဇ် အဖြစ် ဆက်ခံခဲ့သည်။
↑ ၎င်းသည် ဟွမ်ဖူ မီ(皇甫謐) မှ တင်ပြသည့် မွေးသက္ကရာဇ် ဖြစ်ပါသည်။ (215–282).
↑ ဤတွင် သုံးသော တိုင်ဇူ (အနက် မှာ "မဟာ ဘိုးဘေးကြီး") သည် လျိုပန်း ၏ မူလ အသုံးပြုသော အမည်တော်ဖြစ်သည်။အကြောင်းမှာ "တိုင်ဇူ" သည် ရှေး ရှန် မင်းဆက် ကပင် မင်းဆက်တစ်ခုကို ထူထောင်သူ ကို ခေါ်ဆိုသည့် အမည်တော် အဖြစ် ရှေးတရုတ်ပြည်ရိုးရာတွင် မှတ်ယူခဲ့ကြသည်။
↑ စီးမာချင် သည် လျိုပန်းကို "ကောင်းကျူ" ဟု ခေါ်ဆိုသည်။ အဓိပ္ပါယ်မှာ "မြင့်မြတ်သော ဘိုးဘေးကြီး" ဟု မဟာ သမိုင်းပညာရှင်မှတ်တမ်းများ တွင် ရည်ညွှန်းထားပြန်သည်။ စီးမာချင်သည် အဘယ့်ကြောင့် "တိုင်ဇူ" အစား "ကောင်းကျူ" ကို သုံးသည့် အကြောင်းကို ထင်ရှားစွာ မတွေ့ရပေ။ စီးမာချင် နောက်ပိုင်း သမိုင်းပညာရှင်များသည် လျိုပန်းကို ရည်ညွှန်းလိုလျှင် "ဟန် ဧကရာဇ် ကောင်းကျူ" ဟု မကြာခဏ အသုံးပြုကြသည်။ ယခုခေတ် တရုတ်ပြည်တွင် လျိုပန်းကို ရည်ညွှန်းသောအားဖြင့် "ဟန် ဧကရာဇ် ကောင်းကျူ" သည် အများ အသုံးပြုသည့် အမည်ပင်ဖြစ်ပေသည်။
↑ တရုတ်စာလုံး "媪" (ǎo) သည် လျိုပန်း၏ မိခင် အမည်ရင်း မဟုတ်ပါ။ထိုစာလုံးကို ထိုခေတ်က အသက်အရွယ်ကြီးမြင့်သည့် အမျိုးသမီးကြီးကို ခေါ်ဆိုရာတွင် သုံးသည်။definition of 媪 တွင် ကြည့်ပါ။
↑ Chi-yen Ch'en (14 ဇူလိုင် 2014)။ Hsun Yueh and the Mind of Late Han China: A Translation of the SHEN-CHIEN။ Princeton University Press။ pp. 171–။ ISBN 978-1-4008-5348-9။
ချင်အာရှီ (သို့မဟုတ်) ချူ ဧကရာဇ် ရီ တရုတ်ပြည် ၏ ဧကရာဇ်
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဟန်_ဧကရာဇ်_ကောင်းကျူ&oldid=638485" မှ ရယူရန်
၁၆ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁၊ ၀၀:၄၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၁၆ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁၊ ၀၀:၄၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။